Tartanka Badda Cas iyo Xeebaha Soomaaliya – Radio Daljir
Tartanka Badda Cas iyo Xeebaha Soomaaliya
Janaayo 4, 2018 11:10 g 0
Masawir: Ciidamada Masar (xulufada Imaaraarka-Sacuudiga-Masar) ee hadda ka hawlgelaya Ereteriya, abbarayena xuludafa Sudan-Turkiga ee jasiiradda Suwaakin
Waxaa sii xoogeysanaya tartanka loogu jiro marinada iyo gacan-ku-heynta Badda Cas, Gacanka Cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya, mid gacansi iyo milateriba. Tartanka oo xooggiisu biloowday xilligii Madaxweyne Xasan Shiikh waa uu sii xoogeystay tan iyo doorashadii Madaxweyne Farmaajo.
Dowladaha ku tartamaya marinada iyo saldhigyada Badda Cas, kan Gacanka Cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya ayaa ah mid ku saleysan xulufeysi wadareed iyo mid kali-kali ah. Dowladaha Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa hadda u muuqda in ay yihiin gaashaanbuur tartan adag ugu jira gacan-ku-heynta Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Halka Turkiga iyo Qadar oo gacan ka helaya Iran ay yihiin lidka gaashaanbuurta Sacuudiga iyo Imaaraatka.
Wadamada tartanka loogu jiro ayaa kala ah Suudaan, Yamen, Erateriya iyo Soomaaliya.
Yamen xaalkeedu waa mid faraha ka baxay, dalkii burburay, dadkiina gaajo iyo cudur meel kasta la dhoobanyiihiin, duqeynta diyaaradaha Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay joogto noqdeen. Dagaalka Yamen oo hadda u muuqda rajobeel ayaa u eg mid saameyn ku sii yeeshay siyaasadda Soomaaliya, Suudaan, iyo haatan tan Erateriya.
Siyaasadda milateri ee Sacuudiga iyo Imaaradka ee ku wajahan dalka Yemen ayaa lagu macneeyey mid ku saleysan siyaasadda Soomaali si fiican uga dheregtay ee “ku cunay ama ku ciideeyey!”
Suudaan oo awal ay Masar xulufo ahaayeen, ayaa sidii uu u biloowday xiriirka cusub ee Suudaan iyo Turkiga u muuqata mid rajobeel ah, abuurteyna khilaaf cusub oo aan horay u jirin, una dhexeeya labada dal. Khilaafka ayaa cirka isku sii shareerey kaddib markii Suudaan ay dhammaadkii sannadkii hore Turkiga ku wareejisay jasiiradda Suwaakin oo horey ahaan jirtay saldhig Boqortooyadii Otamaanka, hadana noqotay meel laga guuray, loogana guuray dekedda cusub ee Suudaan (Port Sudan) oo 60KM waqooyiga ka xigta Jasiiradda Suwaakin. Turkiga ayaa sheegay in uu saldhig ciidan ka dhisanayo jasiiradda.
Xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo jawaab aan gabbasho laheyn ka bixinaya xulufeysiga Suudaan iyo Turkiga ayaa hadda waxa ay gaashaanbuurta ku soo dareen Ereteria, dalkeedana keeneen ciidamo aan tiradooda la shaacin oo ku hubeysan hub casri ah iyo iyo hubka culus ee taangiyada iyo beebeyada.
Jariiradaha Middle East Monitor iyo Al-Sharqi ayaa labaduba waxa ay soo wariyeen in dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka biloowday Ereteriya u jawaab u yahay xulufeysiga Suudaan iyo Turkiga ee Jasiiradda Suwaakin. Al-Sharqa ayaa waxaa kale oo ay soo warisay in Masar iyo Imaaraadku ay u gacan-haadiyeen, shirna isugu yeereen mucaaradka hubeysan ee Suudaan, kuwa Darfuur iyo kuwa Bariga Suudaan.
Dhanka Soomaaliya, weli dalku hal xulufo oo kaliya gacanta uma gelin, laakiin waxaa socda tartan aan xad laheyn oo la rabo in qolo walbaa ay Soomaaliya ku hanato.
Turkiga oo ah dowladda ay Soomaalidu ugu jeceshay dowladaha tartanka ugu jira dalkeeda, laguna jeclaaday waxqabad la taaban karo, waxqabadkaas haba ku ekaado Xamar oo kaliya e, ayaa Xamar ku leh saldhig milateri, keeda adduunka ugu weyn. Saldhigga ayaa illaa iyo hadda waxaa ka hawlgela 200 oo ciidamo Turki ah, kuwaas oo shaqadoodu ay tahay tababarka ciidamada Soomaaliya.
Dhanka kale, Imaaraadka Carabta ayaa ayagu xiriiro toos ah la leh dowlad-goboleedyada Soomaaliya, siiba Puntland iyo Somaliland, waxayna sannadkii hore la wareegeen labada dekadood ee Bossaso iyo Berbera. Sidoo kale waxa ay xuseen in ay saldhig milateri ka dhisan doonaan Berbera, laakiin weli shaqadiisu ay u xayirantahay ismaandhaafyo aan la shaacin.
Saldhigga Berbera ayaa hore loo saadaaliyey in uu yahay kan ciidamada Masaaridu ay ka hawlgeli doonaan. Wargeysyada Suudaan ayaana hore u shaaciyey in dowladda Soomaaliya lala socodsiiyey in 20,000 illaa iyo 30,000 oo ciidamo Masaari ahi ay ka hawlgeli doonaan Soomaaliya iyo Jabuuti.
Dhanka Bossaso, ciidamada Imaaraadka ayaa si dadban uga hawlgala Bossaso, kana hawlgala xerada weyn ee ciidamada Booliska Badda ee Puntland ee loo yaqaan PMPF (Puntland Marine Police Force). Dowladda Imaaraadka ayaa qaabilsan tababarka, qalabeynta iyo mushaar-bixinta ciidamada PMPF.
Intaas waxaa sii dheer dowladda Masar oo sheegtay in aysan marnaba raalli ka noqon doonin biyo-xireenka Itoobiya ee loo leexiyey biyihii wabiga Niilka, si loogu isticmaalo dab-dhalis ay Itoobiya tiri waxa uu lagamamaarmaan u yahay hormarkeeda iyo kan Suudaan. Biyo-xireenka Itoobiya baa haddii laga guulgaaro waxa uu noqonayaa dab-dhaliyaha biyaha kan ugu weyn qaaradda Afrika.
Waxaa kuu soo haray Qadar. Dowladda Qadar ayaa ayana ah, sida Soomaalida oo kale, dowlad loo tashaday, la damaaciyey, laakiin weli leh hoggaan adag iyo shacab isku duuban oo illaa iyo hadda la loodin la’yahay. Hana illaawin waa dowlad kamid ah dowladaha adduunka ugu taajirsan. Siyaasadda Qadar oo horey u ahaan jirtay mid la jaanqaadda tan Sacuudiga, ayaa hadda la xulufo noqotay Turkiga iyo Iran. Hadafka siyaasadeed ee ugu weyn ee dowladda Qadar ayaa hadda u eg mid gacanta u haadinaya xulufo kasta oo ka biyo-diidsan siyaasadda ay hormuudka u yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Isku soo wada duub oo, ma yara saameynta siyaasadaha is hardinaya ee isxulufeysiga ee dalalka Turkiga, Qadar, Iran, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar ay Soomaaliya illaa iyo hadda ku yeesheen, maanta ku leeyihiin, berrina lagu wada baraarugi doonaa. Saas oo ay taheyna ma jiro siyaasi ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo illaa iyo hadda soo bandhigay daraasad ka tarjumeysa khataraha iyo faa’iidoonyinka, kuwo muuqda iyo kuwo dahsoonba, ee Soomaaali uga imaan kara xulufeysiga ka aloosan Soomaaliya iyo Bariga Dhexe iyo waxa la gudboon siyaasiga iyo hoggaanka Soomaaliyeed.
Diiwaanka Radio Daljir
Maqaalo tartanka loogu jiro Badda Cas iyo Xeebaha Soomaaliya:
Additional articles on the battle for the Red Sea and the Somali coast:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17339